कडा NdFeB र SmCo मैग्नेटले कुनै सीधा सम्पर्क बिना केही वस्तुहरू चलाउन शक्ति उत्पन्न गर्न सक्दछ, त्यसैले धेरै अनुप्रयोगहरूले यस सुविधाको फाइदा लिन्छन्, सामान्यतया चुम्बकीय जोडहरू र त्यसपछि सिल-कम अनुप्रयोगहरूको लागि चुम्बकीय रूपमा जोडी पम्पहरू। चुम्बकीय ड्राइभ युग्मनले टोक़को एक गैर-सम्पर्क स्थानान्तरण प्रस्ताव गर्दछ। यी चुम्बकीय दम्पतीहरूको उपयोगले तरल पदार्थ वा ग्यास चुहावट हटाउनेछ प्रणाली घटकबाट। यसबाहेक, चुम्बकीय कपलिंगहरू मर्मतसम्भार पनि निःशुल्क छन्, त्यसैले लागत कम गर्ने।
चुम्बकीय पम्प युग्ममा कसरी काम गर्न आवंटित गरियो?
जोडी NdFeB वा SmCoम्याग्नेट पम्प हाउसिंगमा कन्टेन्ट शेलको दुबै छेउमा दुई गाढा रि .्गहरूमा जोडिएका हुन्छन्। बाहिरी औंठी मोटरको ड्राइभ शाफ्टमा जोडिएको छ; भित्री औंठी पम्प शाफ्ट गर्न। प्रत्येक औंठीले मिल्दो र विपक्षी म्याग्नेटको समान संख्या समावेश गर्दछ, प्रत्येक औठीको वरिपरि वैकल्पिक ध्रुवहरू सहित। बाह्य युग्मनको आधा सवारी चलाएर, टोक़लाई चुम्बकीय रूपमा आन्तरिक युग्मन आधामा प्रसारित गरिन्छ। यो हावा वा गैर-चुम्बकीय कन्टेन्ट बाधाको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ बाहिरी चुम्बकहरूबाट भित्री चुम्बकहरूको पूर्ण अलगावलाई अनुमति दिँदै। म्याग्नेटिक ड्राइभ पम्पमा कुनै सम्पर्क पुर्‍याउने ठाउँ छैन जसले टोकरी र समानांतर दुबै मिसिलिमेन्टमेन्ट मार्फत टोक़ प्रसारणको लागि अनुमति दिन्छ।
किन NdFeB वा SmCo दुर्लभ पृथ्वी चुम्बकीय चुम्बकीय पम्प कपलि in्ग मा चयन गरियो?
चुम्बकीय कपलिंगमा प्रयोग गरिएको चुम्बकीय सामग्रीहरू प्राय: Neodymium र समारियम कोबाल्ट म्याग्नेट निम्नलिखित कारणका साथ छन्:
१. NdFeB वा SmCo चुंबक स्थायी चुम्बकको एक प्रकार हो, जुन बाह्य पावर सप्लाई आवश्यक पर्ने इलेक्ट्रो म्याग्नेट भन्दा प्रयोग गर्न धेरै सजिलो हुन्छ।
२. NdFeB र SmCo मैग्नेट पारम्परिक स्थायी चुम्बकको तुलनामा धेरै उच्च उर्जामा पुग्न सक्छ। Neodymium sintered चुम्बकले आज कुनै पनि सामग्रीको उच्चतम ऊर्जा उत्पादन प्रदान गर्दछ। उच्च ऊर्जा घनत्व कम्प्याक्ट आकारको साथ सम्पूर्ण पम्प प्रणालीको सुधारिएको दक्षतामा पुग्न कम चुम्बक सामग्रीको हल्का वजन सक्षम गर्दछ।
Are. दुर्लभ पृथ्वी कोबाल्ट चुंबक र नियो चुम्बकले राम्रो तापमान स्थिरतासँग काम गर्न सक्दछ। अपरेसन प्रक्रियामा, जब तापक्रम वृद्धि हुँदै छ वा एडी वर्तमान, चुम्बकीय उर्जाले उत्पन्न गरिरहेको तापक्रम बढाउँदै छ भने राम्रो तापमान गुणांक र एनडीएफबी र एसएमसीओ सिन्डर्ड मैग्नेटको उच्च कार्य तापमानको कारण टोक़ कम कम हुनेछ। केहि विशेष उच्च तापमान वा संक्षारक तरल पदार्थको लागि, SmCo चुम्बक चुम्बक सामग्रीको सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो।
NdFeB वा SmCo म्याग्नेटको आकार के छ चुम्बकीय पम्प कपलि ?्ग मा प्रयोग?
SmCo वा NdFeB sintered चुम्बक आकार र आकारको एक विस्तृत श्रृंखला मा उत्पादन गर्न सकिन्छ। चुम्बकीय पम्प कपलिंगहरूमा अनुप्रयोगको लागि, मुख्य रूपमा चुम्बक आकारहरू हुन्रोक्नुहोस्, रोटी वा चाप खण्ड।
स्थायी चुम्बकीय युग्मन वा चुम्बकीय हिसाबले पम्प गरिएको विश्वका लागि मुख्य निर्माता:
पोष्ट समय: जुलाई -१-20-२०१।